प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाबुरामले भने- राजिनामा दिएर जीर्ण शरीरलाई आराम दिनुस् — onlinedabali.com
प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाबुरामले भने- राजिनामा दिएर जीर्ण शरीरलाई आराम दिनुस्
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लोकतन्त्र विरोधी गतिविधिमा लागेको भन्दै राजिनामा मागेका छन् । उनले जीर्ण शरीरलाई आराम दिन राजिनामा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव समेत दिए ।
बजेट अधिवेशको पहिलो दिन प्रतिनिधिसभलाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले भने, “प्रधानमन्त्रीसँग मेरो आग्रह छ, जुन उचाईमा पुग्नुभएको छ । त्यही रहनुस् । तपाईले अनावश्यक ढंगले यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुँदा आफैंमाथि अन्याय भएको छ । रोगले जीर्ण भएको शरीरलाई तपाईले आराम दिनुपर्छ । लोकतन्त्र र आफैं छविलाई बचाउन तपाईले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ ।”
राजनीतिक दल फुटाउने र संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता नभए पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश लोकतन्त्रविरोधी हर्कत भएको भट्टराईले बताए । उनले अध्यादेश फिर्ता लिइहाल्यो, भइहाल्यो भन्ने अवस्था नरहेको समेत बताए ।
सांसद अपहरण प्रकरणमा प्रधानमन्त्री वा निकटस्थ संलग्न भएको बताएको दाबी गर्दै भट्टराईले अपरहणकारीविरुद्ध जाहेरी नलिएको भन्दै आक्रोस पोखे । उनले उल्टै आफूहरुमाथि नै मुद्दा लगाउने र परोक्ष र प्रत्यक्ष ढंगले प्रधानमन्त्रीले पहल गरेको आरोप पनि लगाए ।
ओलीको राजिनामा मागेका भट्टराईले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले दाबेदार नबन्ने प्रस्ताव गरे । उनले ओलीको विकल्प पूर्वप्रधानमन्त्री बन्न नहुने समेत बताउँदै नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्ने धारणा राखे ।
डा. भट्टराईले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर निलम्बनमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन र विप्लवलाई सहमतिमा ल्याउन आग्रह गरे ।